VOKA-PIFIDIANANA TETSY AMIN’NY CENI :: Nahazo 55,66 % i Andry Rajoelina • AoRaha
VOKA-PIFIDIANANA TETSY AMIN’NY CENI Nahazo 55,66 % i Andry Rajoelina
Mandresy amin’ny isam-bato mihoatra ny antsasa-manila. Tsy dia nisy fiovana firy intsony ny voka-pifidianana feno vonjimaika navoakan’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni), omaly. Mitarika amin’ny tahan’ny isam-bato 55,66 % hatrany ny kandidà Rajoelina Andry, raha 44, 46 % ny an’ny kandidà Ravalomanana Marc.
Io no voka-pifidianana vonjimaika farany tamin’ny fifidianana filoham- pirenena fihodinana faharoa navoakan’ny Ceni, omaly tamin’ny 11 ora sy folo minitra antoandro, omaly.
Biraom-pifidianana sivy sisa no tsy nahafeno ny voka-pifidianana feno amin’ireo tarehimarika navoakan’ny Ceni, omaly, ireo. Nanomboka tamin’ io ora io ihany koa no nampitsaharan’ny Ceni ny famoahana ny voka-pifidianana vonjimaika tao amin’ny tranonkalany.
« Anio amin’ny 4 ora hariva no hamoahan’ny Ceni amin’ny fomba ôfisialy ny voka-pifidianana feno vonjimaika », hoy ny fanambaràna navoakan’ny Ceni, omaly hariva.
Nomarihin’ireo mpikambana eo anivon’ity rafitra misahana ny fanomanana sy ny fikarakarana ny fifidianana ity kosa anefa fa “ mbola afaka manohy ny fampitahana sy ny fanamarinana ny voka-pifidianana voaray etsy Alarobia ny solontenan’ ireo kandidà mikasa hanao an’izany”. “Mbola afaka manao an’izany izy ireo hatramin’ny rahampitso maraina (ndlr ; anio maraina)”, araka ny nomarihan’ireo tompon’andraikitra ao amin’ny Ceni.
Fandikan-dalàn’ny miaramila Mandetika an’ireo mihoa-pefy ny Lehiben’ny Etamazaoro
FIGIAZANA HARENA TSY ARA-DALÀNA :: Nahemotr’ireo depiote ny fandinihana an’ilay volavolan-dalàna
Sahia ho tena Raiamandreny